हेर्नुस् चर्चित रियालीटि सो मा देखिने यी सेलिब्रेटिको बास्तविक अनुहार !::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | शनि, भदौ ३१, २०७४
हेर्नुस् चर्चित रियालीटि सो मा देखिने यी सेलिब्रेटिको बास्तविक अनुहार !
एजेन्सी , ३१ भदौ ।
सबैको मनमा बस्न सफल कलाकारहरु यो क्षेत्रमा आउनु अघि कस्ता थिए ? यो सबैको चासोको बिषय हो । हेर्नुस् तपाईहरुले हेर्ने र मनपराउने यी बलिउड कलाकारहरु कस्ता थिए ।
सोनू निगम जब पहिलोपटक इंडस्ट्री मा आएका थिए महिलाहरु उनको लुक्सको दीवानी थिए । हुनत अहिलेपनि सोनू कमाल कै देखिन्छन् । तर सुरु सुरुमा ईन्ड्रिस्ट्रीमा आउदा खुबै ह्यान्सम थिए । उनले एक से एक चर्चित गित गाएका छन् ।
आफ्नो करियर को शुरुआत सलमान खान को फिल्म ‘प्यार किया तो डरना क्या’ बाट गरेका हिमेश रेशमिया ४४ बर्षका भए । इंडस्ट्री मा आएपछि हिमेश ने एक्टिंग पनि गरे तर सफल भएनन् । तस्वीर मा तपाई हिमेशको ट्रांसफॉर्मेशन देख्न सक्नुहुन्छ ।
अभिनेता तथा टीवी होस्ट रणविजय सिंह ले एमटीवीमा आउने ‘रोडीज’ बाट आफ्नो करियरको शुरुआत गरेको थियो । उनी एसै सो का विजेता पनि हुन् ।
त्यसैबेलादेखि यो क्षेत्रमा सुरु गरेका उनले अहिलेसम्म फिल्म र रियलिटी शो मा सफल छन् । सुरुवातमा उनी यस्तो देखिन्थे ।
एक्टर, कोरियोग्राफर और डायरेक्टर रेमो डिसूजा लाई तपाईले कयौ डांस शो मा सपल जजको रुपमा देख्नुभएको छ। रेमो डांस को नयाँ मार्शल आर्ट मा पनि पारंगत छन् ।तस्वीरमा देख्न सक्नुहुन्छ बॉलीवुड इंडस्ट्री मा आएपछि उनको लुक्स कसरी बदलीयो ।
फराह खान बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर र फिल्म निर्देशक हुन् । त्यसका साथै उनी कयौ रियालीटि सोको जज पनि भईसकेकी छिन् ।
शनि, भदौ ३१, २०७४ मा प्रकाशित